သတင်းကောင်း - FBSတွင် ထရိတ်ဒါပေါင်း လေးသန်းပြည့်ပါပြီ! ကံထူးရှင်မှာ ဗီယက်နမ် Bac Ninhမှ Vu Van Thuဖြစ်ပါသည်. ဇူလိုင်လ ၄ရက်နေ့တွင် FBSတွင် အကောင့်ဖွင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လေးသန်းပြည့် ဖောက်သည်တော်ဖြစ်လာခဲ့သည့်အတွက် ထို့နေ့ရက်သည် သူ့အတွက် ကံကောင်းသည့်နေ့ရက်တစ်ရက် ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်.
ယခင်FBS၏ သန်းပြည့်ဖောက်သည်တော်တွေလိုပဲ Vu Van Thuဟာလည်း ကံထူးရှင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ ကံထူးတဲ့အတွက် လက်ဆောင်ပေးလိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ လက်ဆောင်အဖြစ် ဘာလိုချင်ပါသလဲဆိုပြီး FBSကနေ ဖုန်းဆက်ပြီး supriseလုပ်တဲ့အခါမှာ အလွန်အံ့အားသင့်သွားခဲ့ပါတယ်. အံ့အားသင့်တာပြေသွားတော့မှပဲ သူတစ်ချိန်လုံး လိုချင်နေခဲ့တဲ့ - Honda SHမော်တော်ဆိုင်ကယ်အသစ်တစ်စီးကို လိုချင်ပါတယ်လို့ ပြန်လည်အဖြေပေးခဲ့ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီအနေနှင့်လည်း သူရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အကျိုးတော်ဆောင်က တကယ့်ကိုကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကို သိစေဖို့အတွက် သူ့ရဲ့ ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီး ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်!
Thuက Forexအကြောင်း မသိတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး. သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေ ကြားဖူးထားပြီး အကောင့်တွေ ဘာတွေလဲ အရင်ကတည်းကဖွင့်ခဲ့ဖူးပါတယ်. ဒါပေမယ့် ဇူလိုင်လ ၄ရက်နေ့ကမှ အကောင့်စစ်စဖွင့်ပြီး စတင်အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်. "FBSအပေါ် စပြီးနှစ်သက်မိတဲ့အချက်က အသုံးပြုရောင်းဝယ်တဲ့သူတွေအတွက် အလွန်အဆင်ပြေစေတဲ့အချက်နဲ့ ၀န်ဆောင်မှုပေးတဲ့အဖွဲ့ကလဲ အရမ်းကိုမှ ကောင်းမွန်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်.... FBSကို အကြိုက်ဆုံး အချက်ကတော့ ဆင့်အကောင့်ဖွင့်လို့ရတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်. ဆင့်အကောင့်မှာဆို တစ်ဒေါ်လာတည်းနဲ့ စပြီး အရောင်းအ၀ယ်လုပ်လို့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်. ပြီးတော့လဲ ကျွန်တော်တို့လို လူသစ်တွေနားလည်သဘောပေါက်အောင်လို့ စီစဉ်ပေးထားတဲ့ ပညာပေး သင်တန်းအစီအစဉ်တွေလဲ ရှိပါသေးတယ်" လို့ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထရိတ်ဒါတစ်ယောက်တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းလဲ ပြောပြသွားခဲ့ပါသေးတယ်. သူဖြစ်ချင်တဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထရိတ်ဒါတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင်လဲ ပညာပေးလမ်းညွှန်အစီအစဉ်တွေ၊ အရောင်းအ၀ယ် toolတွေ၊ Forexမှာ အဆင်ပြေပြေ ထရိတ်နိုင်ဖို့အတွက် အပိုဆုနဲ့ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်တွေကို FBSအဖွဲ့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားဦးမှာပါ. - မကြာမီလာမယ့် အစီအစဉ်အသစ်တွေကို စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါ. ကံကောင်းပါစေ. ဂုဏ်ယူပါတယ် Vu Van Thuရေ!